U-Immanuel Kant - wayecabangisisa abadumile isiJalimane, owenza umnikelo omkhulu ukuthuthukiswa wefilosofi classical. Imisebenzi yakhe ehambisana kuze kube yilolu suku. Okubaluleke kakhulu ubhekwa ifilosofi ezibucayi of Kant. Cabangela izici zako ezisemqoka nemibono. ongqondongqondo Revolutionary isebenza ukuthi wanikela indlela entsha ngokuphelele zefilosofi. Kunokuba uzindla nezinselele eziningi zokuphila, Kant kuhanjiswe ku kakhulu umsuka. Isazi sefilosofi, ngazibuza ukuthi kazi uqondeni imingcele ulwazi yingqondo yomuntu engokoqobo. Yingakho umbono walokho okubizwa ngokuthi sazi ngokuthi ezibucayi. Imanuweli amelana khona nombono ukuthi ikhono lokufunda kubantu Sichichima.
Ezibucayi nefilosofi Kant sika ihlukaniswe ezindaweni ezintathu ezisemqoka, okungase ngokufingqiwe imibuzo ezintathu ezilula. Eyokuqala wabo - "Yini ngikwazi?". Lapha sazi esenqaba umqondo wokuba khona lula nolwazi olungenamkhawulo. Njengoba ubufakazi, ukuthi ikhombe ukufiphala lokho okubizwa ngomlobokazi bezibona izwe elizungezile. Emibhalweni Kant, zonke izinto ezikhona njengokungathi Ubukhulu ezimbili. Esikhathini sokuqala, into ekhona "futhi phakathi kwakhe," nguye, lokho empeleni. Esikhathini yesibili nesilinganiso lento selivela into. It ikhona kuphela njengoba kuveza e bezibona indoda yakhe. Kant babekholelwa ukuthi into futhi into e eyenzekayo emehlweni ngamunye - kuhlukile ngokuphelele. Ngakho, i-amakhono lolwazi umuntu sincane kakhulu, ngoba ukwahlulela emhlabeni sizophelelwa yisikhathi kuphela ukubonakaliswa kwayo hhayi kusukela ngokoqobo ekhona.
Khona-ke, ifilosofi ezibucayi of Kant izisethile umbuzo elandelayo - "yini okufanele ngiyenze?". Lapha sazi uyazicabangela hhayi abstract, kodwa imisebenzi luyingxenye esisebenzayo. Kant babekholelwa ukuthi ikhodi ethile mayelana nokuziphatha elotshwe umphefumulo ngamunye, okuthiwa "Yizwi likanembeza". Umcabangi wabhala ezincwadini zakhe ukuthi umuntu akumelwe aphile ngayo kuvumelana ngokuphelele kuye. Lapha, ifilosofi ezibucayi of Kant abaxhumana nayo nezimiso eziyisisekelo eningiliziwe emayelana nemfundiso kaZiqu yenkolo yobuKristu. sazi isiJalimane, wabhala ukuthi umuntu akakwazi ukusebenzisa kwabangani bakhe njengendlela ekupheleni. Lokhu kuphambene yonke imithetho yokuziphatha okunjalo. Umuntu kungaba umgomo luyingxenye. Kant babekholelwa ukuthi umuntu okufanele abe ngaphezu propensities zobugovu, wanqotshwa imizwelo engokwemvelo kanye nemizwelo.
Umbuzo wesithathu, okuyinto uphenywa emibhalweni yakhe sefilosofi isiJalimane, kanje - "? Yini Ngithemba for". nefilosofi ezibucayi of Kant kwakusho ngumuntu lokuthi umuntu ophila imithetho yokuziphatha, ethola inkululeko yangempela. Siqukethe e yokuthi umuntu angenza izinqumo zabo siqu futhi ukunquma ezimpilweni zabo siqu, kunokuba wenza "kuma-oda" izidingo zabo zemvelo, okuyinto ingaba mibi kakhulu. Kant babekholelwa ukuthi imizamo yabantu ukuhambisana nayo yonke imithetho neyobuntu kungukuthi ihlawulelwa empilweni, kodwa kufanele aziphathe ngendlela nabo, ngoba umthetho wokuziphatha akunakuphikwa. Isazi sefilosofi, wabhala ukuthi umuntu angase bathembele kuphela uNkulunkulu. Ngakho, inkolo ubangelwa zokuziphatha hhayi okuphambene nalokho, njengoba kukhonjisiwe iningi eminye imisebenzi zezazi kanye nezibalo zenkolo. Kant kunguJesu esikwazi eyingqayizivele kakhulu umqondo wokuba khona kukaNkulunkulu, izitshela-ke. Umcabangi wayekholelwa ukuthi inkolo ulusizo abantu, ngoba kunika ithemba umvuzo wemizamo yabo ukuthobela izimiso zokuziphatha. Okungukuthi, abangabantwana imfundiso yefilosofi Kant kusho ngokwalo ngisho ngaphandle ulwazi olujulile ukubaluleka yokukholelwa kuNkulunkulu, kodwa ukuqaphela ukubaluleka umbono ka kwelizayo, okuyinto kuyokugqiba yonke imizamo yomuntu.
Ama-smartphone "Asus": ukubuyekezwa abanikazi
Akulondoloziwe Far Cry 3 - yini okumele ngiyenze?
19 isicathulo: ubone ukuthi kungakanani ubude ingane izinyawo?
Amazambane nge amakhowe futhi inkukhu kuhhavini - isidlo esilula futhi kwanelise